eDeshantar News | निन्द्रा - eDeshantar News निन्द्रा - eDeshantar News
ननिदाए पनि कोही मानिस निन्द्रामा परेको स्वाङ् रचिदिन्छ । त्यस्ता नाटककारहरू पनि देखिएका
छन् । निन्द्राको प्रकार र क्षमता देश जाति र जनताका आ–आफ्नै हुने रहेछन् । त्यसकारण विश्व निन्द्रा प्रतियोगिता नेपालमा गराउन पाए कस्तो होला ? कतै हाम्रो देश नै सर्वप्रथम हुन्छ कि ? आफ्नो देशको नाक राख्नु सबैको कर्तव्य हो ।
खाएको आहार पचाउन सहयोग गर्छ । निन्द्रावस्थामा सबैको सम्बन्ध ब्रहृमाण्डसँग रहेको बुझिन्छ ।
निन्द्राको महत्व जीवनसँग जोडिएको छ । निन्द्रामा नै हाम्रा सम्पूर्ण नासिएका कोसिकाहरू पुनः निर्माण भएर आउने दिनमा सक्षमता साथ काम गर्न तयार बनेर बस्छन् । अनि निर्वल कमजोर बनेको मान्छे पुनः पुन सबल बनेर आउँछ । असल निन्द्राले आयुलाई बढाईदिन्छ । किन्तु यो औषधी जस्तै गुणकारी भए पनि अतिनै भयो भने खति हुन जान्छ ।
त्यसबेलाको घनघोर जङ्कलले ढाकेको निर्जन शिवपुरी पर्वतको शिखरमा बाबाले के खाए के
खाएनन् । हप्तादिन बितिसकेको थियो । तर त्यो १ हप्ता ध्यानी बाबाका लागि एक दिन भर्खर एकछिन मात्र भएको रहेछ । ध्यानमा समय नरहने भएर होला, सक्कली ध्यानीहरू जङ्कल, गुफा, हिमालयका कन्दराहरू, नदी किनारका ओढार जस्ता निर्जन स्थान खोजेर रोजेर बस्छन् । जहाँ ध्यानमा बाधा पर्न जाँदैन । त्यही उनीहरू रमाउँछन् । दहीलाई मोही पारेर नौनी निकाले झै जीवनको मोही पारेर सार निकाल्छन् ।